OEM / လိမ္မော်ရောင် - ကွမ်ကျိုး Yun ယန်အလှကုန် Co. , Ltd
သင့်ရဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလိုင်းများအတွက်ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အရောင်းအပေါငျးအသငျးမြားလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ကြသည်။ သူတို့ကသငျသညျမစိုက်နှင့်ကျွမ်းကျင်စွာသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု, လက်ျာမေးခွန်းများကိုမေးရန်ဆုံးမသွန်သင်လျက်, သိလျက်သည်သင်၏ clientele.You ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေးစဉ်ရွေးချယ်ရေးရှေ့၌သင်တို့ထုတ်ကုန်ထွက်စမ်းသပ်ဖို့ဘယ်မှာလိုအပ်သောသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်သာသနာကိုနမူနာရွေးချယ်ရာတွင်, အဆင့်မြင့်ဖော်မြူလာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုလိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အညီ, သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးများအတွက်တာဝန်ခံအဲဒီမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုရွေးကောက်တော်မူပြီပြီးတာနဲ့သင့်အကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုပ်ပိုးရွေးချယ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကကြောက်မက်ဖွယ်တာဝန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အမြော်အမြင်နှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ် key ကိုမေးခွန်းများကိုပြီးနောက်, သင့်ရောင်းအားတွဲဖက်သင်တစ်ဦးစည်းလုံးပေါ်တွင်-အမှတ်တံဆိပ်ကြည့်ဖန်တီးဖို့ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးကို select ကူညီပေးပါမည်။
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်နေကြသည်နှင့်သင့်ထုပ်ပိုးကိုရှေးခယျြခဲ့ Now ကို, သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ဆွေးနွေးခြင်းမှပေါ်ရွှေ့မည်။ ဒါဟာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေတဲ့ကြည့်ဖန်တီးဖို့, သင်ကကုမ္ပဏီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ WHO ကသင်ရောင်းနေကြတယ် WHO ကနားလည်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်အဖြစ်။
သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုထူထောင်, သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ရှေးခယျြသောထုပ်ပိုးထားပြီးပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းပေါ်ရွှေ့မည်။ YunYang အလှကုန်မှာဒီ preexisting တံဆိပ်တစ်ခုလိုဂိုထည့်သွင်းထက်အများကြီးပိုပါတယ်, ဒီကသင်၏အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်ပေါ်ကိုသင့်ရဲ့ BRAND ဘာသာပြန်ဆိုရန်ဒီဇိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျအီလက်ထရောနစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကသင်၏တံဆိပ်များတွေထဲကမူကွဲဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး turnaround အချိန်သေချာ, ထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက် & ရောင်းချခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုသင်သည်သင်၏အသစ်ကပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလိုင်းရရှိထားလို့မဆုံးပါဘူး။ ပညာတတ်ပညာရှင်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်သည်ထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်စျေးကွက်နှင့်ရောင်းဖို့လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များနှင့်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပစ္စည်းဒေတာဘေ့စ မှစ. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ On-န်ထမ်းအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပညာရှင်များမှကျနော်တို့ကိုသင်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုရရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။
YunYang အလှကုန်အမြဲပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်များအတွက်အဆင့်မြင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတန်းအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်နှင့်တကွသင်ပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက် 15 နှစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သုတေသနစမ်းသပ်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်နှစ်ပေါင်းများစွာထဲကပြောင်းလဲပါပြီ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့, သင့်သောရူပါရုံကို - ဤနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြှနျုပျတို့သညျ, သင့်အမှတ်တံဆိပ်, သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုနားလည်ကြောင်းသေချာကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားရောင်းအားကျွမ်းကျင်သူများကပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်ဖွင့်, သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်စုံလင်သောထုတ်ကုန်လိုင်းကျွမ်းကျင်စွာကူညီခွင့်မေးခွန်းများမေး။
YunYang အလှကုန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံသင့်ရဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလိုင်း၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်ဖြစ်တယ်, ငါတို့သည်သင်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များသည်လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းကျော်လွန်မှကျူးလွန်နေကြသည်။
အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် & သင်တန်း
whitening Serum, မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစာရွက် , Matcha ရွှံ့မျက်နှာဖုံး , မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစာရွက် , စာရွက်မျက်နှာဖုံး , မျက်နှာမျက်နှာဖုံး ,